Lianchuang Group e ọdịda dị ka n'elu 10 Environmental Ezinaụlọ Appliances Export Companies
Na Disemba 23, 2020, 8th Internationalization Summit Forum of China Electronic Appliances Enterprises and the 2020 China Electronic Appliance Export Top 100 Release Emume gara nke ọma na Shunde, isi obodo nke ngwa ngwa ngwa China. Isiokwu ya bụ “D ...
Lianchuang's Circulating Fan meriri “2020 German iF Design Award”
Fewbọchị ole na ole gara aga, e zigara nrite "2020 German iF Design Award" na ụlọ ọrụ mmeri - Lianchuang Electric, onye enyemaka nke Lianchuang Technology Group, anatawokwa onyinye a site na iji aka ya hazie Pedestal Air Circulator Fan vertical circulating. ..
Canton Fair Global Share —- Lianchuang Technology Group na-alụ ọgụ ọzọ na Canton Fair na igwe ojii
Fewbọchị ole na ole gara aga, 128bọchị nke 128 nke China Bubata na Mbupụ Mbupụ (Ihe ngosi Canton) meghere. Ọrịa zuru ụwa ọnụ metụtara, Canton Fair nke afọ a ka na-aga n'ihu n'ụdị ngosipụta n'ịntanetị, na-egosi teknụzụ na ngwaahịa ndị China na ndị ọrụ gburugburu ụwa. Ngwaahịa gosipụtara Lianc ...
N'ụtụtụ nke October 13, Lianchuang Technology Group nwere a nkwonkwo nzukọ nke atọ nkeji iri na ise nke 2020 na Lianchuang Academy. Onye isi oche otu Lai Banlai, ndị isi otu Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, onye isi oche ndị isi oche Lai Dingquan na ndị isi ndị ọzọ, yana ndị ndu otu ahụ ...
Enwere ike iji igwe oyi iji kpoo ọkụ n'oge oyi?
Enwere ike iji igwe oyi maka kpo oku n'oge oyi. A na-ekewa ndị na-agba ume ikuku n'ụdị abụọ: otu bụ otu ngwa nju oyi nke ikuku oyi, nke ọzọ bụ oyi na ikpo ọkụ nke okpukpu abụọ. Enwere ike ịbịnye nke mbụ na friji, na nke ikpeazụ nwere ike ọ bụghị naanị na refrjiraeto kamakwa okpomọkụ, mana ...
Kedu ihe dị iche na etiti ikuku ikuku na igwe ikuku?
Igwe ikuku bụ ihe eji eme ihe n'oge oyi. Ha na-n'ozuzu ofu. Maka mma, enwere igwe ikuku na ikuku na ahịa, ọ nweghị nke edoziri. Gini bu ihe di iche n’etiti igwe ikuku na ikuku? 1. Kedu ...
Usọrọ Mid-mgbụsị akwụkwọ Festival na usọrọ National Day, na Party Committee of Lianchuang Science and Technology Park ẹkenịmde a isiokwu omume nke ejiri mee snowy ọnwa achicha
Ọ bụ afọ ọzọ nke nlọghachị ọnwa, na afọ ọzọ nke Ememe Ubịa. Na oge nke Mid-mgbụsị akwụkwọ Festival, iji mee ka onye ọ bụla na-eche na amara nke omenala ndiife omenala na ike a siri ike festive ikuku, na mgbede nke September 22, Lianchuang Science and Technology Pa ...
Afọ 27 nke Lianchuang, Mmụọ Shenzhen
Obodo nwere mmụọ pụrụ iche. Maka Shenzhen, ụfọdụ ndị na-ekwu, "Enweghị ike ịlaghachi obodo, ma enweghị ike ịhapụ Shenzhen". Ihe anyị ghọtara karịa n'okwu ikpe a bụ na ma eleghị anya na mpụga Shenzhen, ị gaghị ahụ ụdị mmụọ ọhụụ pụrụ iche na mmetụta nke ikuku mepere emepe ...
Ihe omuma ohuru ohuru nke edobere DF-HT5385P
Site na mmepe nke ọha mmadụ na akụnụba, ọtụtụ mmadụ na-ebiri onwe ha, yana ya na-abịa ịhazigharị ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị. Iji mezuo ọchịchọ ndị ahịa, Tablelọ Ọrụ Mbadamba Igwe DF-HT5385P anyị dị. Obere obere ma nnukwu ume. Mbụ, ka anyị lekwasị anya na ya zuru ezu ...
Ebube na Nrọ - Afọ iri abụọ na asaa nke Lianchuang
Ebube na Nrọ - Afọ 27 nke Lianchuang n'uto Na 1993, ngwaahịa mbụ nke Lianchuang wee pụta ụwa ika redio A song si redio na n'etiti abalị Dị ka a ga-asị na ọ na-akụ na ntị na 1998, Onye mbụ na-ajụ ikuku nke ụlọ wee pụta Lianchuang ika ikuku oyi. Na 2000, onye mbụ paten ...
Lianchuang Ngwa oru merie Red Dot Award - "Oscar" onyinye na Design Industry for Five Consecutive Afọ
N'oge na-adịbeghị anya, ekwuputala ndepụta mmeri nke German Red Dot Award 2020. Ebumnuche ngwaahịa Convection kpo oku nke Lianchuang Appliance mere, onye enyemaka nke Lianchuang Technology Group, ka edeputara aha site na ihe kariri mba 60 gburugburu uwa, ma merie "Red Dot Design Conc ...
Zụta onye na-ekesa ekesa ma jiri ya dị ka onye ọkpọ ọdịnala? Ikwesiri ighota isi ihe ndia!
Oge okpomọkụ dị ebe a, ugboro ole Fans na-adịwanye elu. Dị ka ihe dị n'etiti ndị Fans, ndị na-ekesa ikuku dị ka ọ dị iche na ndị ọkụ eletrik nkịtị, mana na ọnụahịa a, anyị maara na ha abụọ enweghị atụ. Ma, a ka nwere ọtụtụ ndị azụrụ ikuku ...